Manchester City oo ku soo garaacday kooxda Everton garoonka Goodison Park…+SAWIRRO – Gool FM
Manchester City oo ku soo garaacday kooxda Everton garoonka Goodison Park…+SAWIRRO
(London) 28 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta ee Machester City ayaa guul weyn oo muhiim ah kaga soo gaartay kooxda Everton garoonkeeda Goodison Park, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-3
Qeybta hore ee dheesha ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood.
24 daqiiqo kooxda Manchester City oo marti ku aheyd garoonka Goodison Park ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Gabriel Jesus, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kevin De Bruyne.
Laakiin daqiiqadii 33-aad kooxda Everton ayaa heshay goolka barbaraha waxaana 1-1 ka dhigay dheesha Dominic Calvert-Lewin, kaddib caawin uu ka helay saaxiibkiis Seamus Coleman.
Daqiiqadii 71-aad Riyad Mahrez ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Manchester City, kaddib markii uu dhaliyay kubad laad xur ee cajiib ah, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-2.
Laakiin daqiiqadii 85-aad Raheem Sterling ayaa hogaanka u sii dheereeyay kooxdiisa Manchester City wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 1-3 ay guusha ku raacday kooxda martida ku aheyd garoonka Goodison Park ee Manchester City.
NAXDIN: Waxa uu iska dhaliyey gool kulan Koobka Adduunka ah, kaddibna waa la dilay, qisada murugada leh ee ruxday kubadda cagta